Ciidamo loo tababaray habka looga hortago askareenta carruurta xilliyada dagaalka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidamo loo tababaray habka looga hortago askareenta carruurta xilliyada dagaalka
Ciidamo loo tababaray habka looga hortago askareenta carruurta xilliyada dagaalka
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa tababbar u soo gabo gabeeyay 60 askari oo ka tirsan ciidamada amniga dalka, kuwaasi oo la barayay hanaanka looga hortagayo askaraynta carruurta xiliyada dagaalka.
Tababbarkan oo socday labo isbuuc ayaa waxaa gabo gabadiisa ka soo qayb galay xubno ka socday ciidanka Xoogga, Booliska, ururada aan dowliga ahayn iyo xubno ka socdo maamul goboleedyada ayaa waxaa taageertay dowladda Ingriiska iyo ururka lagu magacaabo Romeo Dallaire ee ka hortagga askareenta carruurta ayagoo usoo marinayo Dalhousie University ee Canada.
Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika Soomaaliya ahna Madaxa howlgalka AMISMOM Francisco Madeira ayaa yiri “Waa inaan ka badbaadinaa carruurtaan in loo tababaro fikiradaha guracan ee xagjirnimada leh iyo in ay gaystaan falal dambiyeedyo ay u geysanayaan dadkooda, Dalkooda iyo Dariskooda”.
Safiirka ayaa sidoo kale sheegay askareenta carruurta inay aad ugu badantahay Soomaaliya wuxuuna sheegay baahida loo qabo in la helo tirada rasmiga ah ee carruuta ka dagaalamayso dalka ee ay sida qaldan uga faa’iideysanayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Tababarkaan oo xoogga lagu saarayay ogaanshaha ama soo saarita carruurta askarta iyo sidii looga hartagi lahaa ayaa waxay isku raaceen dhamaan madaxdii ka soo qayb gashay in ay muhiim tahay carruurtaas ay hellaan dib u habeeyn iyo u dhisid.
Waxay sidoo kale madaxda sheegeen in ay u diyaarinayaan ciidanka Soomaaliya sidii ay ugu diyaar garoobi lahayeen hanashada dalkooda.
Previous articleQoysas raashin loogu qeybiyay degmada Doolow
Next articleQoysas raashin loogu qeybiyay degmada Doolow